I-PGA Tour Sentry Tournament ye-Champions Golf Tournament
Le ngqungquthela yaziwa ngokuba yi-Sentry Tournament of Champions ukususela ngowama-2018, xa iStry ithatha i-SBS njengesihloko esixhasayo. Ngaphambi koko, i-Hyundai ne-Mercedes-Benz bebexhasi bexhasi.
Lo mqhudelwano ngowona mcimbi wokuqala wonyaka wekhalenda kwi-PGA Tour kwaye uvule kuphela kubagaluli abaphumelele umcimbi wezokhenketho ngethuba elidlulileyo. Oko kuthetha ukuba intsimi idla ngo-35 okanye golers, kodwa ukuba nayiphi na umdlali wehla, loo golfer ayifakwe endaweni.
U-2018 we-Sentry Tournament weeMidlalo
Kwawunqoba u-Dustin Johnson. UJohsonson wathola iinqwelo ezine ze-PGA Tour ngexesha le-2016-17, kwaye wanyuka ngqo kunye nomnye ukuphumelela ukuvula i-2018. Wafumana amanqaku angama-66-65 ngeveki ukugqiba nge-24-ngaphantsi kwe-268, izibhozo ezisibhozo phambi koMnumzane Jon Rahm. Kwakuyimpumelelo ye-17 ye-PGA Tour ye-Johnson.
UJustin Thomas ugibele izimbobo ezimbini zokugqibela ukufuna ukutshatyalaliswa kwamathathu ngoHideki Matsuyama. Kwakuyi-Tomasi inqanaba lesithathu lokunqoba kwePGA Tour kunye neyesibini kwixesha le-2016-17. UTomas wavula ngeentambo ezintathu ezilandelelanayo ezingama-67 ngaphambi kokuvalwa kunye no-69. Wagqiba nge-22-phantsi kwe-270.
Iingxelo zeTournament kwi-Tournament of Champions
Ngokubanzi: 261 - Ernie Els , 2003
Ingxelo yekhosi yokuvakasha: 62 - KJ Choi, 2002; UGraeme McDowell, ngo-2011
Iinqophiso: 5 - UJack Nicklaus
I-Tourry Tournament ye-Champions Champions Course
I-PGA Tour Sentry Tournament of Champions idlalwa kwi-Plantation Course e-Kapalua Ihotele eKapalua, eHawaii, kwikhosi le nkqubela eya kutsho ngo-1999.
Ukususela ngo-1953-68, le midlalo yayidlala eLas Vegas, Nev., Kuqala kwiDesert Inn Country Club, ngoko kwiStardust Country Club. Ngowe-1969, umqhudelwano uhambela eLa Costa Country Club eCarlsbad, eCalif., Kwaye wadlala apho minyaka yonke ngo-1998, ngaphambi kokufudukela eHawaii.
I-Tournament ye-Champions Trivia kunye namaNqaku
Umncintiswano unyaka ukuya ngo-1953, kunye no-Al Besselink njengeqhawe lokuqala. Kuze kube ngo-1993, "I-Tournament of Champions" yayisoloko iyingxenye yegama lomcimbi. Igama lesiganeko lijikeleza phakathi kwabathengi beetekisi eziliqela, de kube ngowomqhubi we-2011, "I-Tournament of Champions" yabuyiselwa kwisihloko somcimbi.
UJack Nicklaus ubambe irekhodi ngeminqweno emihlanu kulo mcimbi. IGold Bear yabanjwa ngo-1963, 1964, 1971, 1973 no-1977.
Abadlali begalufu ababini bawine i-Hyundai Tournament yeeMidlalo iminyaka emithathu elandelelanayo: iGen Littler (1955-57) kunye noStuart Appleby (2004-06). Abanye ababini bawuthabathele umdlalo kathathu: Arnold Palmer (1962, 1965-66) noTom Watson (1979, 1980, 1984).
Ukunqoba kweTiger Woods kokubili kufike kwiindawo eziphambili. Ngo-1997, u-Woods noTom Lehman kwafuneka babuyele kwimimoya embi kakhulu ukugqibezela umdlalo we-tournament. I-Woods yaphantse idibanise i-tee shot, kwaye i-playoff yayingaphaya phantse ngokukhawuleza xa iqala. Ngo-2000, i-Woods kunye no-Ernie Els baqhube umkhosi ongenakulibaleka phambi kokuba i-Woods iphumelele.
Ngomqhubi we-2016, iJordan i-Spieth yaba yinto yesibini ye-golfer kwimbali yezokhenketho ukugqiba umdlalo we-72-engama-30 phantsi okanye ngaphantsi .
Abaphumeleleyo kwi-Tournament ye-Championship ye-PGA Tour
(Utshintsho kwigama lomncintiswano liyabonwa; i-p-playoff; i-weather iyancishiswa.)
I-SBS Tournament yeeMidlalo
Ngo-2018 - uDustin Johnson, 268
2017 - UJustin Thomas, 270
I-Hyundai Tournament yeeMidlalo
2016 - iJordan i-Spieth, 262
2015 - uPatrick Reed-p, 271
2014 - uZach Johnson, 273
2013 - uDustin Johnson-w, 203
2012 - uSteve Stricker, 269
2011 - uJonathan Byrd, 268
2008 - UDaniel Chopra, 274
2007 - UViay Singh, 278
2005 - uStuart Appleby, 271
2002 - USergio Garcia-p, 274
2001 - uJim Furyk, 274
2000 - iTiger Woods-p, 276
Ngo-1999 - uDavid Duval, 266
Ngo-1998 - uPhil Mickelson, 271
1997 - iTiger Woods-pw, 202
1996 - uMark O'Meara, 271
Ngo-1995 - uStep Elkington-p, 278
1994 - uPhil Mickelson-p, 276
Ngo-1993 - uDavis Love III, 272
1992 - uStep Elkington-p, 279
Ngo-1991 - uTom Kite, 272
I-MONY Tournament yeeMidlalo
1990 - UPaul Azinger, 272
1989 - USteve Jones, 279
1988 - USteve Pate-w, 202
1987 - iMac O'Grady, 278
Ngo-1986 - uCalvin Peete, 267
Ngo-1985 - uTom Kite, 275
1984 - UTom Watson, 274
1983 - ULunny Wadkins, 280
1982 - ULunny Wadkins, 280
Ngo-1981 - uLee Trevino, 273
1980 - uTom Watson, 276
Ngowe-1979 - uTom Watson, 275
Ngo-1978 - uGary Player, 281
Ngowe-1977 - uJack Nicklaus-p, 281
1976 - uDani kaJanuwari, 277
Ngo-1975 - i-Al Geiberger-p, 277
Ngo-1974 - uJohnny Miller, 280
Ngo-1973 - uJack Nicklaus, 276
Ngowe-1972 - uBobby Mitchell-p, 280
Ngo-1971 - uJack Nicklaus, 279
Ngo-1970 - uFrank Beard, 273
1969 - uGary Player, 284
1968 - uDani kaJanuwari, 276
1967 - UFrank Beard, 278
1966 - uArnold Palmer-p, 283
Ngo-1965 - uArnold Palmer, 277
1964 - uJack Nicklaus, 279
1963 - uJack Nicklaus, 273
1962 - uArnold Palmer, 276
1961 - USam Snead, 273
1960 - uJerry Barber, 268
1959 - UMike Souchak, 281
1958 - UStan Leonard, 275
1957 - uGene Littler, 285
1956 - uGene Littler, 281
1955 - uGene Littler, 290
1954 - I-Wall Wall, 278
12 Abagadi beGoli kuphela abaye bawutyelela yi-US Open
Yintoni enokuyilindela ukusuka kwisiGaba sokuQala seReiki
Iimbali zeKrisimesi zeBantwana kunye neentsapho
Indlela i-Super Bowl eya kuba ngayo
Amagama ka Allah
I-Arna Bontemps: Ukubhala i-Harlem Renaissance
Ziziphi Iincwadi ZesiGrike SesiGrike
INkosi uRandall: I-Anonymous Folk Ballad
Iimpawu zoMxwayiso Zetyhefu
I-Top Apps ze-Stage Tech
Ingaba Inkukhu Yenyama? Nezinye ii-FAQ ezimangalisayo malunga neLente
Biography ka Nikola Tesla